बारा बनाउने जिम्मा सेनालाई
हुरी पीडित बारा, पर्साका बासिन्दलाई बर्षा अघि नै स्थायी बासको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदले नेपाली सेनालाई निर्देश दिएको छ । यो निर्देशपछि नेपाली सेनाले काम थाले पनि कस्तो खालको बास बनाइदिने हो ? यसको रुपरेखा सरकारले नदिएको जानकारी आएको छ । सेनाले समयमै खाका पाएन भने कसरी स्थायी बसोबास बनाइदिन्छ ? सेनामाथि जनताको विश्वास घट्न सक्छ, यसैले सेनालाई निर्देशका साथै साधनस्रोत र योजना दिनु जरुरी छ ।
सेनाले आजसम्म पाएको जिम्मेवारी बखुवी निभाएकाले र नमकको सोझो गर्ने नेपाली सेनाको मुख्य उद्देश्य नै रहेकाले पनि सेनालाई अवगालबाट बचाउनका लागि सरकारले निर्देश र योजना तत्काल दिनु जरुरी छ ।
अव बर्षा आउन लामो समय छैन । छत बिहीन जनता हावा हुरी र वर्षाको चपेटामा छन् । खासगरी बालबृद्ध, सुत्केरी महामारी र सर्पदंशसम्मको जोखिममा छन् । तिनको बास र पानी, उपचार र खानपानको व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउन जरुरी छ । घटनाको हप्तादिनसम्म पनि कसैलाई मातैमात, कसैलाई पुर्पुरोमा हात भएका दृश्यहरु र लाजमर्दो रुपमा राहतमा सेल्फी खिच्नेहरुको भीड पनि देखिएको छ । व्यवस्थापनमा ठूलो कमजारी छ ।
नेपाली सेनाका तर्फबाट समेत मोडल बनाइएको जानकारी आएको छ । सरकारले ती मोडलमा सहमत हुने कि सरकारका तर्फबाट मोडल दिने हो, त्यसको निर्णय भइसकेको छैन । निश्चय नै नेपाली सेनाले अन्य विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन गरेजस्तै बारा पर्साको विपद व्यवस्थापन तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नेमा बारा पर्साबासीमात्र होइन, सिंगो मुलुक विश्वस्त छ ।